China Glass Bottle IV Solution Production Line mpanamboatra sy mpamatsy | IVEN
IV Solution Production Line - Glass tavoahangy LVP
Milina fanasana lamba:
Ity milina ity dia ampiasaina amin'ny fanasana tsara ho an'ny tavoahangy fitaratra fampidirana, mifandimby hampiasa ny rano ara-dalàna, ny rano voadio, ny rano fanindronana, ny rivotra voafehy madio, ny rano tsindrona vaovao ary ny rivotra voadidy madio hanasana ny tavoahangy mifandimby.
Tunnel sterilization mikoriana ampiasaina amin'ny famadihana sterilization maina ny tavoara ary manafoana ny hafanana, mety hahatratra ny hafanana avo indrindra 300 ～ 350 ℃, fotoana fanamorana mandritra ny 5-10 minitra.
Izy io dia manana faritra miasa telo (faritra preheat, faritra fanafanana, faritra fampangatsiahana).
Famenoana, fanalana rivotra, famahanana nitroka, milina fijanonana
Ny ampahany feno dia mandray an'i Alemana GEMU mameno valizy, avo lenta.
Ny famandrihana nitroka avy hatrany aorian'ny famenoana, ary ny fiarovana ny azota eo anelanelan'ny fihenan'ny azota sy ny fijanonana.
Tsy misy tavoahangy tsy misy famenoana, tsy misy tavoahangy tsy misy fanasan-damba, tsy misy tavoahangy tsy misy gazy, miantoka ny haavon'ny habakabaka ao anaty fitoeran-drivotra mandritra ny fandroahana, mandritra izany fotoana izany, alao antoka fa ny oksizenina sisa tavela ajanona (fifehezana ao anatin'ny 1.0%)。
Masinina mameno sy mijanona
Masinina famenoana ranoka aseptika dia asa tena marina sy marin-toerana. Ny habetsaky ny famenoana dia azo ovaina mivantana amin'ny alàlan'ny HMI, eto dia manana ORABS miaraka amina fantsom-piaramanidina laminar-driaka tsy misy fangarony.
Ampiasaina indrindra amin'ny famandrihana tavoahangy fitaratra izy io. Fandidiana mitohy. Maka sy manaparitaka, miaraka amin'izay koa manakodia ny satroka. Aorian'ny fahavitana, ny satrony dia manana ny habeny sy ny sisiny milamina, ny fisehoany tsara. Haingam-pandeha, ambany simba.
1.Sokantsary misaraka ho an'ny mpanadio antonony, tsy misy loto mandoto, araka ny fepetra takian'ny GMP.
2.Feno lohan-doha miaraka amin'ny famenoana, ny fahamendrehana avo lenta.
3.Adopt ny rafitra servo drive feno, tsy misy fampitana mekanika.
4.Ny fiasan'ny nitroka azo alahatra (alohan'ny hamenoana, mandritra ny famenoana, aorian'ny famenoana).
5.Vao haingana ny fotoana fanovana ho an'ny haben'ny tavoahangy samihafa.
Fampiharana any amin'ny hopitaly:
Famenoana, famakiana nitroka, milina fanakanana
Fahaiza-mamokatra 60-100BPM 100-150BPM 150-300BPM 300-400BPM
Haben'ny tavoahangy ampiharina 50ml, 100ml, 250ml, 500ml
Mameno ny marina ± 1.5%
Rivotra voafintina (m³ / h) 0.6Mpa 1.5 3 4 4.5
Herin'aratra KW 4 4 6 6
Ny haben'ny masinina (L × W × H) (MG) 2500 * 1250 * 2350 2500 * 1520 * 2350 3150 * 1900 * 2350
Manaraka: Masinina syringe efa vita